Wasiir Cabdiraxmaan Xoosh oo Raaligelin ka bixiyey hadaladii kasoo yeeray iyo Xildhibaanada oo cafiyey | SAHAN ONLINE
Wasiir Cabdiraxmaan Xoosh oo Raaligelin ka bixiyey hadaladii kasoo yeeray iyo Xildhibaanada oo cafiyey
Wasiirka Dastuurka Dawladda Federaalka Soomaaliya Cabdi Xoosh Jibriil
MUQDISHO – Wasiirka Dastuurka ee Xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa saaka hortagay Gollaha Baarlamaanka Soomaaliya ,wuxuuna ka raaligeliyey qoraal uu soo dhigay Bartiisa Twitter-ka kaasoo uu kaga hor jeeday qaraarkii uu Baarlamaanku ku diiday go’aankii Maxkamadda Sare.
Wasiir Cabdiraxaan Xoosh ayaa hadalkii uu ka jeediyey Baarlamaanka,wuxuu ka codsaday in laga cafiyo hadaladii kasoo yeeray isla markaana uu raalli gelin ka bixinayo.
Walaalayaal waxaan idin dhihi lahaa haddii hadalladii aan qoray ay xanaf qaarkiin idiin keentay inaad raali ka noqotaan, ulajeedkayga ma ahayn inaan baarlamaanka u gafo, baarlamaanka isagaa la igu dhaariyey waxaan idinka baryayaa taasi inaad iga qaadataan, waxaan idiin balanqaadayaa inaan wada shaqeynno, shaqo badan baa inaga dhaxeysa, waxaan balanqaadayaa in si hufan idin kula shaqeeyo, markaad ii yeertaan idiin imaado, su’aalaha aad qabtaanna idiin kaga jawaabo” ayuu yiri Wasiir Xoosh.
Guddoonka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa aqbalay raalli gelinta Wasiir Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil,waxaana ay u fasaxeen in uu howlihiisa shaqo sii-wato.
Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ka carooday qoraalada uu Wasiir Xoosh ku qoray bartiisa Bulshada,waxaana ay ka keeneen mooshin ay ku dalabanayaan in uu ku hor yimaado Baarlamaanka si su’aalo looga weydiiyo.